Element AR Backup | 360ed
360ed ELEMENTS AR
Elements AR Flashcards and Augmented Reality based learning Application is designed with primary and middle school students in mind. The Augmented Reality display brings chemistry to life for learners due toafun game-based learning experience. Learners can build selective compounds by combining elements flashcards. Narration in the app helps learners to understand the relevance of chemistry to everyday life.
Inatraditional classroom education, students usually find it difficult to pronounce names of elements and compounds. A pronunciation guide in the Elements AR App,however, will help even young learners to pronounce them correctly. Colorful 4D Models break down difficult concepts into an accessible, easy-to-understand guide to the world of elements, molecules and binary compounds. For parents who want to give their childrenahead start in science education, the Elements AR App isaperfect choice.
Elements AR Box ဆိုတာ ဘာလဲ?
Elements AR Box မှာ Flashcards လေးတွေ နဲ့ Application ပါဝင်ပါတယ်။ Elements AR Application ကတော့ ဓာတုဗေဒရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ ဒြပ်စင်တွေနဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေအကြောင်းကို ကာလာစုံဒြပ်စင်ရုပ်ပုံကတ်များ၊ 4D ရုပ်ကြွများ၊ မော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံများနဲ့အတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာနိုင်မယ့် ဖုန်းအပလီကေးရှင်း (Mobile Application) တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းထဲမှာ အပလီကေးရှင်း (Application) ကို ဒေါင်းလော့ခ် (Download) ဆွဲပြီး ထိုအပလီကေးရှင်းထဲမှာရှိတဲ့ AR Section ထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် Elements AR ဘူးထဲမှာပါတဲ့ ကတ်လေးတွေကို ချိန်ပြီး Scan ဖတ်လိုက်တဲ့အခါ 4D ရုပ်ကြွများနဲ့အတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှင်းလင်းချက်များကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ(၂) မျိုးနဲ့ ဖတ်ရှုနားထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကတ်ကလေးများကို ကိုယ်တိုင်ပေါင်းစပ် Scan ဖတ်ကာ ဒြပ်ပေါင်းလေးများ (compounds) ရှာဖွေပြီး လေ့လာနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဓာတုဗေဒရဲ့မရှိမဖြစ် Periodic Table ရဲ့ Energy Trends တွေကိုလည်း 4D ရုပ်ကြွအနေနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။ လေ့လာပြီးတဲ့အခါလည်း ကိုယ့်ရဲ့တတ်မြောက်မှုကို ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ဖြေဆိုနိင်တဲ့အပိုင်းလည်း ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။
ဘာကြောင့် Elements AR Flashcards နဲ့ Application ကို အသုံးပြုသင့်တာလဲ?
Chemistry ဟာ မြန်မာကလေးအများစု အခက်တွေ့တဲ့ ဘာသာရပ်၊ လေ့လာဖို့ကြောက်ရွံ့မပျော်ရွှင်ကြတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Elements AR Flashcards နဲ့ Application သုံးပြီး Chemistry ဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး လေ့လာဖို့ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အလွယ်တကူသက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ Chemistry ရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ ဒြပ်စင်တွေနဲ့ဒြပ်ပေါင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖော်ပြထားတာမို့ ကလေးတွေ အလွယ်တကူနားလည်လွယ်ပြီး Chemistry ကို လေ့လာသင်ယူရတာ ပျော်ရွှင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဆီမှာ လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်နဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အခြေခံကို ရရှိသွားပြီဆို သိပ္ပံသင်ယူရမှာကြောက်တဲ့ ကလေးတွေဟာ သိပ္ပံကိုချစ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာမှာ အမှန်ပါပဲ။
· ဓာတုဗေဒကို စတင်သင်ယူကြမယ့် အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများ
· မိမိရဲ့ သားသမီးလေးတွေ ဓာတုဗေဒလေ့လာတဲ့အခါ အခက်မကြုံပဲ အခြေခံကောင်းတစ်ခုရရှိစေလိုတဲ့မိဘများ
· အခြေခံဒြပ်စင်၊ ဒြပ်ပေါင်းတွေအကြောင်း သင်ကြားဖို့ ခေတ်မှီကောင်းမွန်သောသင်ထောက်ကူရှာနေတဲ့ သိပ္ပံဆရာဆရာမများ
· အသံထွက်များ၊ 4D ရုပ်ကြွပုံကလေးများပါရှိတာကြောင့် မိမိကလေးကို မူလတန်းအရွယ်ငယ်စဉ်ကတည်းက သိပ္ပံနဲ့ ထိတွေ့စေလိုတဲ့မိဘများ
· အထက်တန်းမှာ ဓာတုဗေဒ အခြေခံမပိုင်ခဲ့လို့ အခက်ကြုံနေရတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ
· ဒြပ်စင်၊ ဒြပ်ပေါင်းတွေအကြောင်းလေ့လာသင်ယူလိုတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ
· ရှေ့နှင့် ကျော ၂ဖက်လုံး AR ဖတ်နိုင်သော ရေစိုခံဒြပ်စင်ကတ်ပေါင်း ၃၀ ( From 1H to 30 Zn)
· AR ဖတ်နိုင်သော ဒြပ်စင်ဇယားကတ် (Periodic Table)
· နံရံကပ် ဒြပ်စင်ဇယားပိုစတာ (Periodic Table Poster)
· ဒြပ်စင်အခု (၃၀) ပါရှိပြီး တစ်ခုချင်းစီရဲ့
- စတင်တွေ့ရှိသူနှင့် စတင်တွေ့ရှိသည့် အချိန်
- အခြေခံအက်တမ်တည်ဆောက်ပုံ (Atomic Structure)
- ဒြပ်စင်နှင့် မော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံများ
- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ (Physical Properties)
- အမည်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
· ဒြပ်စင် (၃၀) ကြားမှာရှိတဲ့ လူသိများတဲ့ဒြပ်ပေါင်းများ
· ဒြပ်စင်ဇယားမှာရှိတဲ့ ဒြပ်စင် (၁၁၈) ခုလုံးရဲ့ Atomic Size၊ Ionization Energy၊ Electron Affinity၊ Electronegativity များ (Trends in Periodic Table) တို့ကို 4D ရုပ်ကြွများ၊ အရောင်အသွေးစုံပုံများ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှင်းလင်းချက်များသုံးကာရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။
· အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ ဘာသာစကား (၂)မျိုးဖြင့် ဖတ်ရှုနားထောင်နိုင်ပါတယ်
There are four main features in the app: AR (Augmented Reality), Periodic Table, Quiz, Inventory.
Learners use this feature to scan cards and explore about the elements and compounds. Learners can study about elements' occurrence, molecular structure, atomic structure. (Both sides of the cards are AR scannable.) Combination of two cards may give learners to either comparison of the two corresponding elements on the periodic table orabinary compound involving two relevant elements.
4D Interactive Periodic Table
Learners' understanding of periodic trends will be maximized effortlessly by interacting with 4D graphic illustrations of the trends in the periodic table for six different variables.
Learners can check their knowledge of elements and increases their proficiency in fun and engaging ways
Learners can explore hidden binary compounds by combining cards (back side) using AR feature. Inventory section will show the list and information of the compounds they have discovered
How to activate and use this application!
Step (1) Download the app
Step (2) Scan the QR code inside the box to activate
Step (3) Once you have activated, scan the AR flashcards
How to interact with 3D models!
To move the models, point and press one finger and drag using another finger on the screen
To take pictures, use camera buttons to take pictures with 3D models,can use the same QR code used to activate the Datthinpone Chemistry Application. Datthinpone Chemistry Application is designed for high school students to learn chemistry in fun and engaging ways. Augmented Reality technology is especially used for the concepts and lessons that need to be visualized in multiple dimensions.